Neymar Oo Messi Kusoo Dhoweeyay Paris – Garsoore Sports
Neymar Oo Messi…
Xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr ayaa baraha bulshada qabsaday si uu u muujiyo sida uu ugu faraxsan yahay inuu dib ula middoobo xiddiga lix jeer ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or ee Lionel Messi.
Neymar ayaa fariin soo dhaweyn ah u diray Lionel Messi kaddib markii uu xiddigii hore ee Barcelona yimid Paris xilli uu si xor ah ugu biirayo kooxda Paris Saint-Germain.
Messi ayaa doortay PSG inuu u cayaaro marxaladda xigta ee waayihiisa ciyaareed ee kaddib markii uu 21 sano oo guulo ah uu ku qaatay Camp Nou.
34 jirkaan ayaa awoodi waayay inuu mar kale u saxiixo Barcelona kaddib markii uu dhacay qandaraaskii hore ee uu kooxda kula jiray sababo la xiriira dhaqaale xumo soo wajahday kooxda, wuxuuna si rasmi ah u shaaciyay inuu ka tagayo axaddii, iyadoo PSG ay usoo bandhigtay qandaraas labo sanno ah oo uu sannadkii ku qaadanayo 35 milyan oo ginni, heshiiskana waa ay gaareen labada dhinac.
Messi oo goordhow soo gaaray magaalada Paris ayaa lagu wadaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo maalinta berrito ah inkastoo kooxda PSG ay shaacin horudhac ah kusoo dhoweysay markii uu soo degay.
Wuxuu la middoobi doonaa saaxiibkiisii hore ee kooxda Barcelona ay waqtiga kusoo wada qaateen ee Neymar Junior kaasoo muujiyay inta ay la egtahay farxadda uu u qabo inuu Messi kula midoobo Parc De Princes kasoo bartiisa Instagram-ka soo dhigay isagoo daawanaya muuqaalyar oo ay ku jiraan isaga iyo Messi wuxuuna kusoo qoray: “Isku soo noqod”.
Neymar ayaa fure u ahaa saxiixa saaxiibkiis Messi. Isaga oo taleefanka ka wacay, una diray farriin qoraal ah si uu u ogeysiiyo saaxiibadiisa kooxda dhammaadkii toddobaadkii hore in Leo uu imanayo. Hadda waa la dhammeeyey oo waa la dhammaystiray in lagu dhawaaqaase dhiman ee lasoco wararkeena xiga.
RASMI: PSG Oo Ku Dhawaaqday Messi